Manenona Tranonkala ny Vehivavy: Tantaran’ny Teknolojia Erantany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 7:06 GMT
(Fanamarihana. lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2014)
Amin'ny fizaràna ny tantaran'ireo vehivavy mampiasa ny aterineto sy ireo teknolojia niomerika mba hanovana ny fiarahamonina iainany, namorona fandaharana vaovao ny World Pulse, Women Weave the Web (Manenona Tranonkala ny Vehivavy), manantena ny hanampy amin'ny fampihenana ny fivakisana niomerika. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanangona avy any ifotony ny fahaizan'ny vehivavy miasa avy amin'ny toerana ambany indrindra, hanangona ireo olana sy vahaolana manodidina ny fampandraisana anjara ny rehetra amin'ny niomerika sy ny fampahaleovantena.
Amin'izao fotoana izao izy ireo dia amin'ny dingana voalohan'ny ”Fidirana amin'ny Niomerika” mba hahafantarana ireo fanamby izay mety efa nanànan'ny vehivavy tamin'ny fidirana amin'ny aterineto sy ireo vahaolana notrandrahan'izy ireo.
Ato anatin'ny volana vitsivitsy, hifantoka amin'ny ”Fahaizana manoratra ara-Niomerika” sy ny ”Fampahaleovantena ara-Niomerika” izy ireo, mba hanangonana hevitra mikasika izay fitaovana ilàna sy mba hahitana ny fomba ahafahan'ny Aterineto mamela ny olona hanao fanovana tena izy any an-tranony.
Nanoratra momba ny tetikasa fampianarana teknolojia izay tantaniny miaraka amin'ny vehivavy 10 hafa sy ireo olana natrehiny i Greengirl avy any Nizeria:
Na izany aza, toa nanaitra ahy ny fahitana fa roa monja tamin'ireo mpiofana ihany no nanana imailaka miasa, tsy nisy mbola naheno mikasika ny Skype na ny iray tamin'izy ireo aza, iray ihany no efa tany amin'ny trano fisotroana kafe, ary tsy mihoatra ny roa no afaka miditra amin'ny aterineto amin'ny findainy. Tonga saina tampoka ihany koa aho fa mba hahafahana mahatonga ilay fampiofanana hahazoana tombony bebe kokoa ho an'ny vehivavy, ilaina ny filan'ny tsirairay alohan'ny handehanana manohana ny fahalianana iombonan'izy ireo amin'ny fanaovan-gazety ho an'olon-tsotra, fitantarana ‘mutlimedia’ ary ny fanaovana tambajotra sosialy. Noho izany antony izany no nanatontosako sy nitantanako andiana fampianarana fampahaleovantena niomerika mandritra ny ora 4 isankerinandro.
Manoratra mikasika ny loza atrehin'ny vehivavy any Bangladesh rehefa mampiasa ny aterineto i Monica09:
Ny fiarovana angondrakitra no toa ifantoan'ny ankamaroan'ny resaka mifandray amin'ny aterineto[…] Na izany aza, misy ihany ny fifantohana kely tamin'ny fiantraikan'ny lalàna fiarovana angondrakitra (na ny tsy fahampian'izy ireo) amin'ny olon-tsotra, indrindra ny vehivavy […] Manana toerana malalaka hampidiran'ireo mpampiasa ny torohay mikasika azy ny tranonkala malaza fitadiavana asa, anisan'izany ny pitsopitsony ahafahana mifandray aminy, toy ny imailaka sy ny laharan”ny findainy. Raha toa ka mihevitra ny torohay toy izany ho voaaro ireo mpampiasa, matetika mampiasa tsy araka ny tokony ho izy ireo angondrakitra ireo ny mpiasa amin'ny orinasa na ny mpitantana ny tranonkala mba hanorisorenana vehivavy.
Angamba mety mahagaga ny sasany, ahitana asam-behivavy teratany Amerikana ihany koa ilay tetikasa. Y ( izay mamaritra ny tenany ho toy ny renibe eo amin'ny enimpolo-taona eo no ho ) nifindra tany ambanivohitr'i Appalachia:
Manerana ny tany, olona maro no mino fa milomano anaty ronono, tantely ary fidirana malalaka amin'ny aterineto daholo ny olona rehetra ao Etazonia an'i Amerika. Tamin'ny niainako tany an-tanandehibe maro nandritra ny fiainako, nino aho fa marina izany. Hitako fa, taorian'ny nifindrako taty amin'ity faritra haolon'ny Ala Nasionalin'i Cherokee ity, fa mety ho mbola sarotra ny fifaneraserana, na dia any amin'ny Etazonian'ny taonjato faha-iraika amby roapolo aza… Ny olona izay zatra ny fisiako tsy tapaka tao amin'ny finday dia tsy afaka nahazo ahy intsony. Lasa olana be izany tao anatin'ny fifandraisana sasany maro satria toa nahatsiaro ho nariana ireo mpifandray tamiko. Haingana dia nitady olon-kafa hiresahana izy ireo rehefa te-hiresaka, fa tsy hoe rehefa tao aho.
Kilemaina i Celine manoratra avy any Nizeria ary niresaka mikasika ny fanohanana hitany tao amin'ny aterineto:
Isaky ny henon'ny sofiko ny www, mankany amin'ny WP ny saiko, ilay fitepon'ny tany, sehatra iray izany nanome fahafahana maro ho ahy– vehivavy mipetraka ao amin'ny ambany indrindra ao Nizeria mba hifandray amin'ny vehivavy hafa manerana izao tontolo izao. Misy zavatra itovizako amin'ireo ‘rahavaviko’ amin'ny aterineto manerana ny tany. Ohatra, ny rahavaviko mipetraka any Eoropa dia nilaza tamiko fa noho izy vehivavy kilemaina, dia ny ampitahana in-droa amin'ilay lehilahy mpiara-miasa aminy sady kilemaina ihany koa izy. Namana an-tambajotra avy any Azia ihany koa no nampahafantatra ahy fa satria vehivavy miaina miaraka amin'ny kilema izy, dia tsy misy lehilahy nanaiky ny hanambady azy.
MyrnaPadilla avy any Filipina dia milaza fa izy voatery hanohy hiasa ho an'ny fanitarana ny teknolojia :
Amin'ny maha-vehivavy ahy nahazo hery avy amin'ny teknolojia, dia voatery aho hiasa amin'ny anaran'ireo rahavavy nilaozako. Ny sasany dia miteny foana fa tsy fangatahana izao, fa fiadiana noho ny antony iray. Manantena aho fa marina izany.
Afaka mizara ny tantaranao manokana ao amin'ny World Pulse ianao, araho fotsiny ny torolalany mba hahafahana mahafantatra bebe kokoa (amin'ny teny Frantsay sy Espaniola ihany koa). Afaka mandray anjary miaraka amin'ny sary, tantara, ary amin'ny taotsarintany ianao.